पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र किन जाँदै छन् थाइल्याण्ड ? – Rapti Khabar
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र किन जाँदै छन् थाइल्याण्ड ?
साउन २२, काठमान्डौ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह थाइल्याण्ड जानुहुने भएको छ । देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे चासो राख्दै आउनुभएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र निजी सचिव सागर तिमल्सिनाका साथ भोलि साउन २४ गते शुक्रबार थाइल्याण्डको बैङ्कक जान लाग्नुभएको हो ।
उहाँको यो भ्रमण पारिवारिक रहेको निर्मल निवास स्रोतले जनाएको छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पूर्वराजवादीले राजा फर्कने अफवाह चलाइरहेको बेला उहाँ थाइल्याण्ड जान लाग्नुभएको हो ।
उहाँ त्यहाँ पुगेको केही दिनपछि पूर्वरानी कोमल पनि थाइल्याण्ड जाने हुनुभएको छ । पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह बुधबार दुई छोरी पूर्णिका र कीर्तिकासँगै थाइल्याण्ड जानुभएको छ । अधिकांस भ्रमणमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, कोमल र हिमानी सँगसँगै निस्कने गर्नुभएको छ ।
दशैँको केही दिनअघि मात्र फर्कने गरी पूर्वराजाको परिवार थाइल्याण्ड जान लागेको हो । करिब तीन साता लामो भ्रमणको मिति तय गरी थाइल्याण्ड जान लाग्नुभएका ज्ञानेन्द्र थाइल्याण्डलाई ट्रान्जिट बनाएर विभिन्न मुलुक भ्रमण गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।
उच्चस्रोतका अनुसार पछिल्लो समय ज्ञानेन्द्रको अधिकांस भ्रमण थाइल्याण्ड मात्र हुने गरेको छ । ‘नेपालबाट अन्य मुलुक जाँदा हल्ला हुने भएकाले नातिनीहरूको पढाइको अवस्थाबारे जानकारी लिन भन्दै थाइल्याण्ड जाने गर्नुभएको छ’–स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँँग भन्यो ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वर्षमा दुई पटकभन्दा बढी थाइल्याड जाने गर्नुहुन्छ । उहाँ यसपालि अपार्टमेन्टमा बस्नेगरी थाइल्याण्ड जान लाग्नुभएको हो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र गत वर्ष पनि दशैँअघि थाइल्याण्ड जानुभएको थियो । नेपाल रहँदा पनि गत वर्ष पूर्व, तराई, पश्चिम, मध्यपश्चिम, सुदुरपश्चिम र मध्यमाञ्चलका विभिन्न जिल्ला भ्रमण गरी स्थानीय राजवादीहरूसँग भेट गर्नुभएको थियो ।
भ्रमणमा निजी सुरक्षाकर्मी सशस्त्रका डिएसपी र केही कामदारबाहेक अरुलाई सहभागी गराइने छैन । लामो समयदेखि हिमानी सँगसँगै नबसेका पूर्व युवराज पारस भने नेपालमै रहनुहुनेछ । त्यहाँबाट फर्केपछि उहाँ नेपालमै रहँदै आउनुभएको छ ।
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी भने तीन वर्ष अघिदेखि दुई छोरीको उच्च शिक्षा अध्ययन गराउन अधिकांस समय थाइल्याडमै बस्ने गर्नुभएको छ, ईश्वरराज ढकालले नेपाल समाचार पत्रमा लेखेका छन् ।
संसदीय समितिले तत्कालीन नारायणहिटी राजदरबारको महत्वपूर्ण दस्तावेजहरुको खोजी कार्य सुरु गरेको छ।
राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेजको अभिलेख राख्ने दायित्व पाएको संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले तत्कालीन राजाहरुले नारायणहिटी दरबारमा राखेका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरुको खोजी कार्यलाई अघि बढाएको हो। यसै अभियान अन्तर्गत समितिले सरकारलाई सो दस्तावेज कहाँ छ? त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपछि सरकारले त्यस पत्रको जवाफ समेत दिन सकेको छैन।
मंगलबार समितिको बैठकमा उपस्थिति भएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले पनि ती सबै दस्तावेज सरकार कहाँ आए/नआएको एकीन नभएको जवाफ दिए। उनले सो दस्तावेज पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँगै गयो की भनि आशंका पनि गरे। ‘त्यतिबेला सबै राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज दरबारमा केन्द्रित थिए,’ मन्त्री ज्ञवालीको भनाई थियो, ‘ती सबै यता आएकी आएनन् एकीनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन, जे–जे दस्तावेज थिए भन्ने हामीलाई सूचना छ। तिनीहरुको खोजी गर्ने क्रममा के–के छुटे बुझ्न सकिन्छ। सबै हस्तान्तरण नभएको बुझेका छौं, पूर्व ज्ञानेन्द्र राजा शाहसँगै गयो की?’ मन्त्री ज्ञवालीले समितिको बैठकमा आफैमाथि प्रश्न पनि गरे, ‘नारायणहिटी दरबारमा महत्वपूर्ण दस्तावेज त्यहीँ बाँकी छ वा कुनै ढंगले नष्ट भयो? त्यसको बारेमा एकीन ढंगले भन्न सकिने अवस्था छैन।’
गर्जिए गजेन्द्र: वर्षमान र कुलमान श्री ३ महाराज
नेकपाका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई श्री ३ महाराजको संज्ञा दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद महतले कर्णालीको सदरमुकाम जुम्लामा २०३८ सालमा बनेको २ सय किलोवाटको वत्ती बिग्रिएका कारण जिल्ला अन्धकारमा पर्दा पनि सम्बन्धीत निकायले चासो नदेखाएको भन्दै आक्रोश पाखे।
जिल्लाबासीको समस्याबारे जानकारी गराउन खोज्दा उर्जामन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले भेट नदिएको गुनासो उनले गरे। उनले भने “यति मिडियामा आईसक्यो। यति सामाजिक सञ्जालमा आइसक्यो। यति धेरै हामीले फोन गरिसक्यौ। यति धेरै भेट्न प्रयास गर्यांै हाम्रा श्री ३ महाराजलाई। हाम्रा श्री ३ महाराज भन्या को हो भने कुलमान घिसिङ। अनि अर्का श्री ३ महाराज हुनुहुन्छ उर्जामन्त्री वर्षमान पुन। फोन पनि उठ्दैन भेटघाट गर्न पनि पाईदैन।”
म्याद सकिँदा काम आधा
सुदूर–पश्चिम प्रदेशको गौरव आयोजना भनिएको धनगढी–मोहना–अत्तरिया जोड्ने ६ लेन सडकको म्याद सकिँदा आधा पनि काम भएको छैन। आयोजना कार्यालय र निर्माण कम्पनीको कमजोरीका कारण ठेक्का सम्झौताअनुसार आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने म्याद सकिएको दुई महिना हुँदा आधामात्रै काम भएको हो।
सुदूर–पश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीलाई जोड्ने एकमात्र सडकको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा धेरै असर परेको स्थानीय बताउँछन्। सडकमा खाल्डाखुल्डी र निर्माणाधीन कल्भर्टले दुर्घटना भएर सर्वसधारणको अकालमै ज्यान गइरहेको छ भने सुक्खा याममा सडक धुलाम्ये र बर्खामा हिलाम्ये भएर सर्वसाधारणले सास्ती खेपेका छन्। ‘आयोजना र ठेकेदारको चरम लापरवाहीले ६ लेन सडक निर्माणको काम लम्बिँदा हामीलाई धेरै समस्या भएको छ,’ स्थानीय जयबहादुर बोहराले भने। समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा ठाउँठाउँमा रहेका खाल्डा र निर्माणाधीन कल्भर्टका कारण मोहना पुल–अत्तरिया खण्डमा दुर्घटनामा परी अहिलेसम्म ६ जनाको ज्यान गएको छ भने कयौं घाइते भएका छन्।
भूमिगत जिबनले थबाङका दौँतरी कमरेडलाई सम्झिंदा
Posted on July 14, 2019 Author Rapti Khabar
– सन्तोष बुढामगर मैले तपाईंंलाई थबाङमा भेट्न पाइनँ । तपाईंलाई हजारौँथबाङी जनताका माझ शिर निहु¥याएर सलाम गर्न पनि पाइनँ । मैले सुनेँ तपाईं हामीबाट सदाका लागि भौतिक रूपमै बिदा लिएर जानुभएछ तर म भौगोलिक रूपले टाढा छु । प्रतिकूल परिस्थितिकाकारण तपाईंका बारेमा ढिलो खबर पाएँ । मलाई हो कि होइन भन्ने निकै खुलदुली लागिरह्यो । […]
श्रीमती भारतमा कोठी चलाउने, श्रीमान् नेपालबाट युवती पुर्‍याउने
Posted on August 12, 2019 Author Rapti Khabar
भारतको कोलकातामा कोठी (वेश्यावृत्तिका लागि तोकिएका घर) सञ्चालन गर्ने नुवाकोटका एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कोलकाताको ‘रेड लाइट’ क्षेत्र सोनागाक्षीमा कोठी सञ्चालन गर्ने राजु स्याङतान भन्ने अजय लामा र उनका सहयोगी राजु तामाङलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको विशेष टोलीले शनिबार पक्राउ गरेको हो। नुवाकोटकी एक २० वर्षीया युवती लिएर भारत हिँडेका दुवैलाई विशेष सूचनाका […]
दाङ: दूधमा चिनीमात्र मिसाएर ‘ब्रान्ड’ बनेका मिठाई बाजे, यस्तो छ संघर्षको रामकहानी
Posted on October 9, 2020 Author Rapti Khabar
नारायण खड्का/सेतोपाटी दाङ, असोज २३, ६७ वर्षीय कृष्णप्रसाद शर्मा कुनै दिन बिहान ढिलो उठे भने गाउँले ढोकामा हान्न आइपुग्छन्। उनको घर तुलसीपुर बजारदेखि ९ किलोमिटर पश्चिम दंगीशरण गाउँपालिका-५ को पोटली गाउँमा पर्छ। उठेर नित्यकर्म सकेपछि टिनले पाली हालेको सानो घरको चुलोमा उनले आगो बाल्छन्, कराही बसाल्छन्। त्यसपछि सुरू हुन्छ पेडा बनाउने काम। बिहान पाँच बजे […]
माईला दाईको झोलाको जीवन र साहासिक बिचार जेल-नेलले कहाँ गल्यो र ?
ग्रान्डी हस्पिटलले चकनाचुर पारिदियो सपना सबै !